सम्पादकीय : नयाँ जंगबहादुरको विपक्षमा | NepalDut
वैशाख ८ गते २०७७
सोमबार अनौठो परिदृश्य देखियो । मन्त्रीपरिषद्बाट एकाएक २ अध्यादेश पारित भए, साँझ दुवै अध्यादेश जारी भए । विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाएको कोरोना कहरका कारण देश लकडाउनमा भएका बेला सरकारको प्राथमिकता कोरोनाबाट मुक्ति कि व्यक्ति स्वार्थ ? अहिले संसदमा नेकपासँग करिब २ तिहाइ छ, यस्तो बेलामा अध्यादेशबाट कानुन संशोधनको औचित्य के ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी काम गरेका छन् । उनी जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री हुन् । संसदलाई छलेर किन चाहियो अहिले अध्यादेश ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पनि अध्यादेश आजै जारी भए । विवादित भएमा मन्त्रीपरिषद्मा फिर्ता पठाउने, केही दिनपछि जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रपतिमाथि पनि औंला ठडिएको छ । विपक्षीले अब भन्ने छन्, ‘कुनै बेला केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुँदा उनै पक्षबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत रहेकी उनी अझै जनताको राष्ट्रपति बन्न सकिनन्, एमालेकै नेता रहिन् ।’ केवल प्रधानमन्त्रीका टुक्का र उनी निकट केही सल्लाहकार, सहयोगीका छुद्र टिप्पणीले यसको जवाफ दिन सक्दैन ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा आफ्नै पार्टीका सांसदले सरकारलाई समर्थन नगर्दा सरकार ढलेको इतिहास छ । देशको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, दल टुटफुट बनाउने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु खेदजनक छ । प्रधानमन्त्रीले अरुलाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि तीर प्रहार गरेका छन् । उनको कदमबाट साबिक एमालेकै माधव नेपाल पक्ष र साबिक माओवादी पक्ष तर्सिएका छन् । आफूखुसी सरकार सञ्चालन, नियुक्ति आदि गरिरहँदा पार्टीभित्रै आलोचना बढेको र अल्पमतमा पर्दै गएपछि उनले यस्तो चाल चालेको आकलन पनि छ ।
विपक्षीले अब भन्ने छन्, ‘कुनै बेला केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुँदा उनै पक्षबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत रहेकी उनी अझै जनताको राष्ट्रपति बन्न सकिनन्, एमालेकै नेता रहिन् ।’
आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने आवस्था आए ओलीले पार्टी विभाजनका लागि सहज बाटो बनाएको नेकपाभित्रै विश्लेषण भइरहेको छ । पार्टीका अरु पक्षलाई वेवास्ता गरी नियुक्ति, निर्णय र आफूखुसी काम गर्न नपाए पार्टी निर्णयलाई पनि लल्कार्ने ओलीको शैली देखिएकै छ । साबिक एमालेकै नेपाल खेमा र साबिक माओवादीको विरोधले ओलीका अबका दिन थप असहज हुने देखिन्छन् । त्यसमाथि कोरोना विश्व महासंकटका बेला राजनीतिको महाजाल बुनेकोमा उनको लोकतन्त्र विरोधी कदमको समयले उचित मूल्यांकन गर्ने नै छ । नयाँ जंगबहादुर यो युगले स्वीकार्दैन । चेतना भया ।